American Airlines sy JetBlue dia manambara sidina vaovao Saint Lucia avy any Dallas, Newark ary New York JFK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Saint Lucia » American Airlines sy JetBlue dia manambara sidina vaovao Saint Lucia avy any Dallas, Newark ary New York JFK
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
American Airlines sy JetBlue Investment avy amin'ny ivon-toerana fizahan-tany manan-danja dia maneho ny fahatokisanao ny fanarenana COVID-19
Manampahefana misahana ny fizahan-tany Saint Lucia mankalaza ny fanambarana ny sidina amerikana marobe sy fiaramanidina JetBlue vaovao tsy miato mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenan'i Hewanorra
American Airlines dia hanolotra sidina vaovao tsy an-kiato isan-kerinandro avy any Dallas, Texas, manomboka ny 5 Jona 2021
JetBlue dia nanambara sidina vaovao avy any Newark, New Jersey (EWR) manomboka ny 1 Jolay 2021
Efa ho herintaona taorian'ny nanombohan'ny valan'aretina Covid-19 dia nankalaza ny fanambarana vaovao vaovao maro ny Saint Lucia Tourism Authority (SLTA) American Airlines ary sidina JetBlue tsy an-kijanona mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena any Hewanorra (UVF) avy amin'ireo ivon-toeram-pizahantany any Etazonia, manomboka amin'ity fahavaratra ity.
"Ny fahavaratry ny 2021 dia fotoana lehibe ho an'ny fizahan-tany, satria miverina amin'ny traikefa azo antoka ny mpividy ary mitohy hiara-hiaina amin'ny COVID ny nosintsika," hoy ny minisitry ny fizahantany, Honorable Dominic Fedee. “Ny fahatokisana fa American Airlines ary JetBlue nasehony tamin'ny fampidirana sidina vaovao mankany Saint Lucia avy any Dallas, New York ary New Jersey izay manamafy fa mitombo ny fangatahana dia lavitra ary maniry mafy izahay hanome fitsaharana ilaina ho an'ny fianakaviana, ny mpivady ary ny mpitsangatsangana rehetra mitady fialan-tsasatra. ”
“Ireo mpitsidika an'i Saint Lucia amin'ity fahavaratra ity dia hahatsapa fandraisana tsara avy amin'ireo Maso Losiana eto an-toerana izay vonona miaraka amina vokatra fizahan-tany mamelombelona, ​​fijanonan'ny COVID azo antoka ao amin'ny hotely sy vilaninay, ary ny fotoana hiroboka amin'ny hetsika ara-kolontsaina sy ny fikarohana ny tontolo voajanahary madio, "hoy hatrany ny minisitra Fedee.
American Airlines dia nanambara ny sidina voalohany avy any Dallas mankany UVF
American Airlines dia nanambara fa hanolotra sidina tsy miato isan-kerinandro vaovao avy any Dallas, Texas, manomboka ny 5 Jona 2021. Ny serivisy American Airlines A321 voalohany dia hiala ao amin'ny Airport Dallas / Fort Worth International (DFW) amin'ny 8:40 maraina Central Standard Fotoana (CST), tonga amin'ny UVF amin'ny 3:40 hariva Atsinanana Karaiba Fotoana (ECT). Ny serivisy fiverenana dia hiala amin'ny UVF amin'ny asabotsy amin'ny 2:30 hariva ECT ary tonga ao amin'ny DFW amin'ny 7: 22 pm CST. Hitohy hatramin'ny 14 aogositra 2021 ny sidina ary hiverina amin'ny vanin-taona ririnina 2021/2022.
Ny fangatahan'ny mpitsangatsangana any amin'ny faritr'i Texas dia voaporofo fa matanjaka tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, satria i Saint Lucia dia nampiarahaba ireo mpitsidika avy amin'ny tsenan'i Dallas sy ireo tanàna mpamatsy azy amin'ny alàlan'ny sidina mampifandray. Ny fampiasam-bola American Airlines dia nanao tamin'ity sidina DFW tsy an-kijanona ity dia hanome traikefa fitetezam-paritany ho an'ny mpitsidika avy amin'ity faritra ity sy ny sisa.
JetBlue sy American Launch New Flight avy any New York / New Jersey Market
Ny faritry ny fanjakana New York dia tsena fizahantany ambony ho an'i Saint Lucia, miaraka amin'ireo mpitsidika avy any avaratra atsinanana no laharana voalohany amin'ny fahatongavan'i Etazonia. Seranam-piaramanidina roa no nanampy sidina vaovao avy amin'ity faritra manan-danja ity:
Vao tsy ela akory izay ny American Airlines dia nanambara ny fanombohana serivisy vaovao tsy an-kijanona avy amin'ny John F. Kennedy International Airport (JFK) any New York. Ny sidina AA dia hanomboka amin'ny 5 Jona 2021, miainga amin'ny 8:05 maraina Atsinanana Standard Time (EST) ary tonga any UVF amin'ny 12:20 pm ECT. Ny sidina miverina dia hiala amin'ny UVF amin'ny 1:20 pm ECT ary tonga ao JFK amin'ny 5:43 pm ECT.
Ary koa ao amin'ny faritry ny New York Tri-State, JetBlue dia nanambara sidina vaovao avy any Newark, New Jersey (EWR) manomboka ny 1 Jolay 2021, ka manamora ny fisidinan'ny mponin'i New Jersey mankany Saint Lucia. Miala intelo isan-kerinandro ny sidina ny talata, alakamisy ary asabotsy amin'ny 8:40 maraina EST ary tonga any UVF amin'ny 1:27 pm ECT. Ny sidina miverina dia hiala amin'ny UVF amin'ny 2:55 pm ECT ary tonga ao amin'ny EWR amin'ny 7: 47 pm EST. Serivisy Mint atolotra amin'ny sabotsy voafantina. Manampy ny JetBlue tsy misy fijanonana avy any amin'ny seranam-piaramanidina New York JFK.
Ankafizin'ny mpanjifa ny safidin'ny sidina avy amin'ny tanàna maro any Etazonia
Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany Saint Lucia dia manolo-tena amin'ny ezaka mitohy hanomezana fiaramanidina mitombo ho an'ireo Amerikanina mandeha any Saint Lucia. Avy any Etazonia izao, American Airlines dia manome tsy an-kijanona isan'andro avy any Miami (MIA), ary serivisy isan-kerinandro avy any Charlotte (CLT), Chicago (ORD) ary Philadelphia (PHL). Ny Delta Airlines dia miasa avy any Atlanta (ATL) miaraka amina serivisy mivantana isan'andro. JetBlue dia manome sidina intelo isan-kerinandro avy any New York (JFK) ary manohy ny sidina isan'andro amin'ity volana aprily ity. JetBlue koa dia manana sidina isan-kerinandro avy any Boston (BOS).
Hatramin'ny niverenan'ny sidina iraisampirenena voalohany tany Saint Lucia tamin'ny Jolay 2020, dia nampihatra protokol Covid-19 tompon'andraikitra hatrany ny firenena, manome fiarovana bebe kokoa ho an'ny mpitsidika sy ny olom-pirenena eo an-toerana. Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany Saint Lucia sy ny fikambanan'ny fandraisana vahiny sy fizahan-tany any Saint Lucia, miaraka amin'ny minisiteran'ny fahasalamana sy ny minisiteran'ny fizahantany, dia manohy miasa miaraka hanome valiny haingana ny fivoaran'ny Covid-19 manerantany.